CherryCherry334's Reading List - CherryCherry334 - Wattpad
CherryCherry334's Reading List
ကျွန်မလို System အချောလေး နဲ့အတူ ယုတ်မာကြရအောင်လား Host
18.3K 2.1K 18
" ဖားဘဲ ! " System : ကျွန်မက ဖားမဟုတ်ပါဘူး host ... ကျွန်မက မြေခွေးပါ " မြေခွေးဘဲ ! " System : ..... ခဏကြာသော် " System မင်းက ဘာလို့ ယောက်ျားသံကြီးပေါက်သွားရတာလဲ ဟမ် ! ပြီးတော့ ဘာလို့ အိမ်ကြီးက ဇောက်ထိုးကြီး ဖြစ်နေရတာလဲ အေ့ " System : point 5000 ပေးရင် host ကို ရမယ် တစ်စုံတစ်ယောက် : ရော့ point 10000 *သတို့သမီးစတိုင်...
မာယာဟူသည် သင်တို့၏ ရန်သူ
216 33 5
[ uni ] အဟက် ! ဘာ သောက် မာယာလဲ ဘာ သောက် ဂရုမှမစိုက်ဘူး ရှင်းလား ! သောက်ကျင့်တော့ လာမယုတ်နဲ့ ! သောက်ခွက်ကို ဖြတ်ရိုက်မှာ !!! Writer by - Cherry and La Main Lian [ Zawgyi ] အဟက္ ! ဘာ ေသာက္လဲ မာယာ ဘာ ေသာက္ ဂရုမွမစိုက္ဘူး ရွင္းလား ! ေသာက္က်င့္ေတာ့ လာမယုတ္နဲ႔ ! ေသာက္ခြက္ကို ျဖတ္ရိုက္မွာ !!! Writer by - Cherry and La Main L...
I am in novel
2.6K 452 9
Novel လောကရဲ့ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူမရေးထားတဲ့ Novel ထဲက စိတ်ဝိညာဉ် လေးတစ်ခုနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး စိတ်ဝိညာဉ်လေး အငိုတိတ်ဖို့ အတွက် Novel ထဲ သွားရောက်ရသောအခါ............... Novel ေလာကရဲ့ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္တဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ သူမေရးထားတဲ့ Novel ထဲက စိတ္ဝိညာဉ္ ေလးတစ္ခုနဲ႔ ေတြ့ဆံုၿပီး စိတ္ဝိညာဉ္ေလး အငိုတိတ္ဖို႔ အတြက္...